Mateo 25 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuabo Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Cubeo Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Catío) Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Gitonga Greek Greek Sign Language Guahibo Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Inga Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Creole Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Maya Mexican Sign Language Mixtec (Guerrero) Moore Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quechua (Huaylla Wanca) Rapa Nui Romanian Ronga Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Mateo Asɛmpa No 25:1-46
KRISTO MMAE HO NSƐNKYERƐNNE (1-46)
Mmaabun du ho mfatoho no (1-13)
Dwetikɛse ho mfatoho no (14-30)
Nguan ne mpɔnkye (31-46)
25 “Ɔsoro Ahenni te sɛ mmaabun du a wɔfaa wɔn nkanea+ puei sɛ wɔrekohyia ayeforokunu.+ 2 Ná wɔn mu baanum yɛ nkwaseafo, na baanum yɛ mmadwemma.*+ 3 Nkwaseafo no faa wɔn nkanea, nanso wɔamfa ngo anka ho. 4 Mmadwemma no de, wɔfaa ngo guu ntoa mu kaa wɔn nkanea no ho. 5 Bere a ayeforokunu no rekyɛ no, wɔn nyinaa ani kumii, na wɔfaa mu dae. 6 Ɔdasum na wɔtee nteɛm bi sɛ: ‘Ayeforokunu no ni oo! Mumpue nkohyia no.’ 7 Ɛnna mmaabun no nyinaa sɔree, na wɔhwɛɛ wɔn nkanea no hwɛe sɛ biribiara yɛ pɛpɛɛpɛ anaa.+ 8 Na nkwaseafo no ka kyerɛɛ mmadwemma no sɛ, ‘Momma yɛn mo ngo no bi, efisɛ yɛn nkanea no reyɛ adum.’ 9 Mmadwemma no buae sɛ: ‘Ebia na ansõ yɛne mo. Enti monkɔ wɔn a wɔtɔn no nkyɛn nkɔtɔ bi.’ 10 Bere a wɔrekɔ akɔtɔ bi no, ayeforokunu no bae. Na mmaabun a wɔayɛ krado no ne no kɔɔ ayeforohyia apontow no ase,+ na wɔtoo pon no mu. 11 Ɛno akyi no, mmaabun a aka no nso bae, na wɔkae sɛ, ‘Owura, Owura, bue yɛn!’+ 12 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ‘Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, minnim mo.’ 13 “Enti monkɔ so nwɛn,+ efisɛ munnim da anaa bere* no.+ 14 “Afei nso, ɔsoro Ahenni te sɛ onipa bi a ɔrebetu kwan a ɔfrɛɛ ne nkoa de n’ahode hyɛɛ wɔn nsa.+ 15 Ɔmaa ɔbaako dwetikɛse* anum, ɔmaa ɔbaako abien, na ɔmaa ɔfoforo nso baako, sɛnea wɔn mu biara ahoɔden te, na otuu kwan. 16 Ntɛm ara na nea onyaa dwetikɛse anum no de kɔyɛɛ adwuma, na onyaa anum kaa ho. 17 Saa ara na nea onyaa abien no san nyaa abien kaa ho. 18 Na nea onyaa baako no de, okotutuu fam de ne wura sika* no siee hɔ. 19 “Bere tenteenten akyi no, nkoa no wura bae, na ɔne wɔn buu akontaa.+ 20 Enti nea onyaa dwetikɛse anum no de dwetikɛse anum kaa ho bae sɛ, ‘Me wura, womaa me dwetikɛse anum; hwɛ, manya dwetikɛse anum aka ho.’+ 21 Ne wura no ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Mo, akoa pa nokwafo! Woadi nneɛma kakra mu nokware. Mɛma woahwɛ nneɛma pii so.+ Nya wo wura anigye no bi.’+ 22 Na nea onyaa dwetikɛse abien no bɛkae sɛ, ‘Me wura, womaa me dwetikɛse abien; hwɛ, manya dwetikɛse abien aka ho.’+ 23 Ne wura no ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Mo, akoa pa nokwafo! Woadi nneɛma kakra mu nokware. Mɛma woahwɛ nneɛma pii so. Nya wo wura anigye no bi.’ 24 “Awiei koraa no, akoa a onyaa dwetikɛse baako no bae, na ɔbɛkae sɛ: ‘Me wura, minim sɛ woyɛ obi a w’asɛm yɛ den; baabi a wunnuaa hwee no, ɛhɔ na wutwa nnɔbae, na baabi a wunhuw biribiara so no, ɛhɔ na woboaboa ano.+ 25 Enti misuroe, na mede wo dwetikɛse no siee fam. W’ade ni, gye.’ 26 Ɛnna ne wura no buaa no sɛ: ‘Akoa bɔne; onihafo. Sɛ́ wunim sɛ baabi a minnuaa hwee no, ɛhɔ na mitwa nnɔbae, na baabi a minhuw biribiara so no, ɛhɔ na meboaboa ano? 27 Enti anka ɛsɛ sɛ wode me sika* no kɔto sikakorabea, na meba a, manya me sika ne ɛho nsiho. 28 “‘Enti munnye dwetikɛse no mfi ne nsam, na momfa mma nea ɔwɔ dwetikɛse du no.+ 29 Na obiara a ɔwɔ bi no, wɔbɛma no bi aka ho ama aboro no so. Na nea onni bi no, nea ɔwɔ mpo, wobegye afi ne nsam.+ 30 Mompam akoa a mfaso nni no so no nkɔ abɔnten sum no mu. Ɛhɔ na obesu na waka ne se asi so denneennen.’* 31 “Onipa Ba no+ bɛba n’anuonyam mu a abɔfo nyinaa ka ne ho,+ na ɔbɛtena n’anuonyam ahengua so. 32 Wɔbɛboaboa amanaman nyinaa ano n’anim, na ɔbɛpaapae nnipa no mu mmaako mmaako, sɛnea oguanhwɛfo paapae nguan ne mpɔnkye mu no. 33 Na ɔde nguan no+ begyina ne nsa nifa so, na ɔde mpɔnkye no agyina ne benkum so.+ 34 “Afei Ɔhene no bɛka akyerɛ wɔn a wɔwɔ ne nifa so no sɛ: ‘Mommra, mo a m’Agya ahyira mo, momfa Ahenni a wɔasiesie ama mo fi bere a wɔhyɛɛ wiase ase* no nni. 35 Efisɛ ɔkɔm dee me, na momaa me biribi dii; osukɔm dee me, na momaa me biribi nomee. Meyɛɛ ɔhɔho, na mugyee me fɛw so;+ 36 medaa adagyaw,* na momaa me biribi kataa me ho.+ Meyaree, na mohwɛɛ me. Medaa afiase, na mobɛsraa me.’+ 37 Ɛnna atreneefo no bebua no sɛ: ‘Awurade, da bɛn na yehuu wo sɛ ɔkɔm de wo na yɛmaa wo aduan dii, anaasɛ osukɔm de wo na yɛmaa wo biribi nomee?+ 38 Da bɛn na yehui sɛ woyɛ ɔhɔho, a yegyee wo fɛw so, anaasɛ woda adagyaw a yɛmaa wo biribi kataa wo ho? 39 Da bɛn na yehui sɛ woyare anaasɛ woda afiase a yɛbɛsraa wo?’ 40 Na Ɔhene no bebua wɔn sɛ, ‘Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, esiane sɛ moyɛ maa me nuanom nkumaa yi mu baako nti, moayɛ ama me.’+ 41 “Afei ɔbɛka akyerɛ wɔn a wɔwɔ ne benkum so no sɛ: ‘Mo a wɔadome mo, mumfi me so nkɔ+ daa ogya+ a wɔasiesie ama Ɔbonsam ne n’abɔfo no mu.+ 42 Bere a ɔkɔm dee me no, moamma me hwee anni; na osukɔm dee me no, moamma me hwee annom. 43 Meyɛɛ ɔhɔho, nanso moannye me fɛw so; medaa adagyaw, nanso moamma me biribi ankata me ho; meyaree, na medaa afiase, nanso moammɛhwɛ me.’ 44 Na wɔn nso bebua sɛ: ‘Awurade, da bɛn na yehui sɛ ɔkɔm anaa sukɔm de wo, anaasɛ woyɛ ɔhɔho anaa woda adagyaw, anaa woyare anaa woda afiase a yɛammɛsom wo?’ 45 Ɛnna obebua wɔn sɛ: ‘Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, esiane sɛ moanyɛ amma nkumaa yi mu baako nti, moanyɛ amma me.’+ 46 Na eyinom befi hɔ akɔ daa ɔsɛe* mu,+ na wɔn a wɔteɛ no bɛkɔ daa nkwa mu.”+
^ Anaa “anyansafo.”
^ Ná Greek dwetikɛse mu duru yɛ kilo. 20.4. Hwɛ Nkh. B14.
^ Nt., “dwetɛ.”
^ Obi yɛ saa a, ɛkyerɛ sɛ ne bo afuw, na ne ho yeraw no.
^ Greek asɛmfua a yɛakyerɛ ase “adagyaw” no, ebetumi akyerɛ sɛ obi nhyɛ hwee koraa. Ebetumi nso akyerɛ sɛ, nea ɔde hyɛ n’ataade ase no, ɛno nko ara na ɛhyɛ no.
^ Kyerɛ sɛ, wobetwa wɔn afi nkwa mu. Nt., “dua a wotwitwa ho tow gu.”